Booqashooyinka iyo baaritaanada caafimaadka ee macnaha guud ee shaqada
Qof kasta oo ku jira shaqada (shaqaale, shaqo-waxbarasho, tababare, sarkaal dawladeed, iwm.) waxaa saameeya baaritaannada caafimaadka ee xaaladda shaqada.
Waa maxay booqashooyin iyo baaritaanno caafimaad oo ku saabsan xaaladda shaqada?
Dhanka shaqada, waxaad awood u yeelan kartaa oo aad xaq u leedahay inaad la tashato xirfadle caafimaad xirfadeed inta lagu jiro baaritaanka caafimaadka. Xirfadlayaasha caafimaadka shaqadu waa kalkaaliyayaasha caafimaadka shaqada ama dhakhaatiirta caafimaadka shaqada. Waxa kale oo loo yaqaan Adeegyada caafimaadka iyo ka hortagga shaqada (SPST) qaybta gaarka ah ama daawada ka hortagga ah ee qaybta dadweynaha.
Booqashada caafimaadku waa xilliga ka hortagga iyo adeegyada caafimaadka shaqada, takhtarka ama kalkaalisada caafimaadka shaqadu, ay hubiyaan in goobtaada shaqadu ay ku habboon tahay xaaladdaada caafimaad. Takhtarka shaqadu wuxuu markaa ku wargelinayaa khataraha soo-gaadhista booskaaga oo tilmaamaya habka ka-hortagga iyo la socodka in la meel dhigo si loo ilaaliyo caafimaadkaaga.
Shaqaalaha: booqashooyin caafimaad oo ku saabsan xaaladda shaqada
Booqasho kasta oo caafimaad (marka laga reebo booqashada ka soo kabashada ka hor), takhtarka shaqadu waxa uu sameeyaa shahaado booqasho
Booqashooyinka iyo baaritaanada caafimaadka ee macnaha guud ee shaqada 17-Abriil, 2022Tranquillus
READ Tababarka Excel - Kobcinta wax soo saarkaaga Excel
horeWarbixin iyo ka hortag booqasho caafimaad
socdaWaxaan ka baqayaa in aan shaqada ku waayo caafimaadkayga dartii: sidee baan shaqadayda u haysan karaa?